Sina 1.25 Fantsom-bolo vita amin'ny Aluminum vita amin'ny orinasa sy mpanamboatra | Foen
1.25 Tube Aluminum voaaro famafazana
Azonao atao ny mandamina ny mombamomba aluminium eto amin'ny vidin'ny orinasa! Ny vondrona FOEN dia mandrakotra faritra 1 332 000 metatra tora-droa, trano famokarana 4 trano, famoahana isan-taona ho an'ny mombamomba aluminium dia mahatratra 300.000 taonina, mety hahatratra 50.000 taonina ny fantsom-by vy.
Azonao atao ny mandefa vokatra marika aluminium be dia be tsy manahy momba ny fotoanan'ny fandefasana, fa aza manahy momba ny kalitaon'ny mombamomba ny mombamomba anay aluminium.
Anaran'ny vokatra Profil aluminium
Akora Hazo aluminium toa ny andiany 6000, andiany 7000 sns.
Fitsaboana ny tany milina vita, anodized, electrophoresis, coating vovony, polishing, fofona fasika, ary hoso-doko fluorocarbon.
Endrika kanto isaky ny sary, mandrafitra indray araka ny filana na ny filana an-tsena.
Kalitao azo antoka ISO9001, Taratasy fanamarinana nomen'ny Bureau Veritas Certification
Ampiasao varavarana sy varavarankely, lakozia, fanamboarana fitaovana, indostria, rindrina lamba eo amin'ny masoandro, masoandro, haingon-trano, fitaovana fitaterana entana, ary fananganana hafa na trano fananganana.
Vidiny mety Vidiny FOB FUZHOU: USD $ 2300-3000 / Ton
Antsipiriany amin'ny fandefasana 15-20days taorian'ny nahazoany ny fandoavam-bola
Previous: Door misy fantsom-bolo aluminium
Manaraka: 2 × 2 Mofomamy mofomamy fantsom-bolo aluminium
Tetikasa fanitarana aluminium ekonomika miaraka amin'ny ISO ...
Ny fantsom-baravarana vita amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny aluminiana
Tube fihodinana boribory miaraka amin'ny alàlan'ny marika alumina isan-karazany